« Hiragasy makotrokotroka » : nafana ny fifandonana voalohany | NewsMada
« Hiragasy makotrokotroka » : nafana ny fifandonana voalohany
Par Taratra sur 18/07/2016
Nangotraka avy hatrany ny adin-kiragasy voalohany, nanokafana ny « Hiragasy makotrokotroka 2017 », tetsy anoloan’ny lapan’ny Tanàna. Samy nafonja ny voalazan-dRafarahasimanga Georgine sy Ramilison Besigara Zanany, omaly tolakandro.
Azo lazaina ho efa fahazaran’ny mpankafy hiragasy ny mijery ity karazan-javakanto mampiavaka ny eto afovoan-tany ity, isaky ny fotoam-pialan-tsasatra toy izao. Maro sahady ireo tonga nanatrika ny fanokafana ny « Hiragasy makotrokotroka », omaly tolakandro tetsy Analakely. Narahin’ny adin-kiragasy voalohany, nifanandrinan-dRafarahasimanga Georgine, avy any Ambohimandroso, sy Ramilison Besigara Zanany, izany.
Tsy diso hevitra izy ireo, satria azo lazaina ho ny samy ngeza no nifandona. Nanokatra ny sehatra ny tariky ny avy any Ambohimandroso. Mampiavaka ny hiragasy, araka ny ankafizan’ny maro azy, ny fananarana ambaran’ny tononkira, indrindra ny ao anatin’ny renin-kira. Samy voatsindrontsindron-dRafarahasimanga tao daholo ny mpivavaka mpihatsara velatsihy, ny mpamosavy, ny mpisotro toaka, sns.
Tsy ambakan’izany ny voalazan-dry Ramilison Besigara Zanany tao anatin’ny « Aza mikitika ny tsy an’ny tena ». Nohamafisin’izy ireo ilay hoe « raha zanaka tsy tia ray aman-dreny, miteraha hahita ». Na izany aza, nambarany koa fa tsy mety ny manozon-janaka. Voateniteny avokoa ny ankamaroan’ireo toetra ratsy manapoizina fiarahamonina.
Samy mahay ny roa tonta raha ny rima sy ny sariteny enti-manome aina ny hafatra tiana hampitaina. Samy milaza ho tsy mataho-masomena, hiatrika hatramin’ny farany ny fifaninanana.